Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 19/08/2020)
Ny fiaran-dalamby ny lalana amin'ny alalan'ny Eoropa manomboka ao Vienna, renivohitr'i Aotrisy. Roa andro traikefa nahafinaritra be voninahitra eo am-piandrasana. Santionan'izany fiangaly streetscapes sy ny amperora lapa no manomana ny mpamaky ho fisehosehoana kanto, an'ireo trano, ara-kolontsaina sy mozika sangan'asa. Izany no miaraka ny kafe-trano dia nialona ny kolontsaina sy mihetsiketsika famolavolana sary.
Ny havoana dia velona amin'ny Salzburg. Tsy indray mandeha no ampiasaina ho filming toerana ho an'ny tena Nahazo teny fiderana, 'Sound of Music' ary misy Tsapa fahatsapana zavaboary kanto. Koa exudes mangina fahatoniana.
Bavarian Munich sy ny lova dia izay labiera sy ny fomban-drazana dia namorona labiera anisan'ny kolontsainy, fa efa ho fito taonjato. Ny Oktoberfest eo an-tampon'ny lisitra ao Munich. Izany dia ankalazaina ny olona an-tapitrisany izay fitsidihana manerana izao tontolo izao, handray ao amin'ny fankalazàna.
Amsterdam no toerana manan-tantara ny Cruise miaraka lakandrano, izay mahazatra, ary nitsangantsangana amin'ny alalan'ny tranom-bakoka sy ny boaloboka feno toeram-pivarotana. misotro, fisakafoana sy ny famolavolana sary manintona sy ny voly. Amsterdam dia tanànan'ny gaga, ary dia an-trano ny Van Gogh tranom-bakoka ary koa ny hafa maro be harena amin'ny miseho.
Berlin dia mila ny telo andro asitrika. Berlin manana halaza ho ny 'tanàna izay tsy matory'. Raiso manararaotra ny fahavitrihan'ny! Alina sy ny korana anaranam-po dia ho an'ny andro dia ho an'ny ara-kolontsaina mikatsaka.
Ny lamasinina diany tany Eoropa dia mifarana any Prague, araka ny tafio-drivotra ny zava-mahagaga. Prague dia ny tanàna sy ny tilikambo Matetika no ampitahaina ny hatsaran-tarehin'ny Paris. Izany dia midika hoe koa dia nofaritana ho toy ny an-trano ny tsara indrindra ny Eoropa labiera. Ankafizo ny fampisehoana iray 14faha vato taonjato tetezana, tampon-kavoana lapa sy kamo ony. Izany no tonga lafatra fomba hifarana ny lamasinina lalana amin'ny alalan'ny Eoropa.
Ny tsara indrindra tany Eoropa lamasinina fitsangatsanganana hanao antoka fa mahazo aina ary nitsahatra. Ankasitraho ny toerana manodidina teny an-dalana, ny fiarovana ny mandeha lamasinina sy voafehy amin'ny maha zava maro araka izay azo atao. Tsy misy fomba tsara kokoa mba handeha. boky Save A Train amin'izao fotoana izao!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Eoropa Hevitra Misongadina ao By Train In 3 Weeks” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/european-highlights-by-train/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)